China Tube Clamp Machine FRAND-H-14 orinasa sy mpanamboatra | FRAND
Anarana: MESINY CLAMP HOSE
Lafiny (L * W * H): 2000MM * 1800MM * 1800MM
Indostria azo ampiharina: orinasa mpamokatra
Toerana niaviany: XIAMEN
Anaran'ny marika: FRAND
TOSIKARATRA: AC220V 50HZ
Hery (W): 2KW
Milanja: 1 TON
Fonosana: Kitapo hazo
Anarana: MOSY CLAMP HOSE
Serivisy aorian'ny varotra omena: injeniera misy amin'ny milina fanompoana any ivelany
Fahaiza-mamatsy: 50 Set / Sets isam-bolana
Antsipirian'ny fonosana: milina fantsom-pifandraisana
Quantity (Sets) 1 - 1 > 1
Est. Time (andro) 20 Hifampiraharahana
MESINY CLAMP HOSE
1. Ny horonan-tsarimihetsika dia halefa ao amin'ny masinina mivantana amin'ny lalana iray amin'ny alàlan'ny rafitra fisaka mandeha ho azy. Ny manaraka dia ny fidirana amin'ny horonan-tarika dia hokapaina ho refy ary ho tototra amin'ny endrika mety
2. Ny trano fonenana sy ny clip an'ny hose clamp dia hafindra ao amin'ny masinina mivantana amin'ny lalana iray ary koa amin'ny alàlan'ny feeder mivantana miaraka amin'ny fitoerany Hapetraka ao anaty tadin-tànana izy ireo ary hokapaina mafy.
3. Ny horonan-tsarimihetsika fantsom-pifantsonana miaraka amina trano sy horonantsary dia hodiovin'ny masininay amin'ny faribolana tena lavorary ary hamboarin'ny rafitra fitaovana ary avy eo hamindra amin'ny dingana manaraka.
4. Ny visy ny fametahana fantsona dia halefa ao amin'ny masinina mivantana amin'ny lalana iray amin'ny alàlan'ny feeder aelika miaraka amin'ny daba. Ny visy dia hohamafisina ao anaty tady fitehirizana fantsona misy trano sy clip.
5. Aorian'ny dingana ambony dia efa vita ny clamp fantsona. Misy ny rafitra fanaraha-maso eo amin'ny toeram-pivoahana mba hahafantarana raha mihidy mafy tsara ny vokatra vita ary ny tsela maimaim-poana dia mifanaraka tanteraka amin'ilay takiana.
6. Ny vokatra farany dia sintonina avy amin'ilay lalao izay sokajina ho lasa sokajy tsara na ratsy. Ny vokatra tsara dia mikoriana mankany amin'ny fitoeran'ny vokatra tsara ary ny entana simba dia mikoriana mankany amin'ny fitoeran-javatra maloto ho fanangonana.
Previous: Masinina fanamafisam-peo mihodina amin'ny sofina
Manaraka: Fahombiazana avo T Bolt AC220V 50HZ Tube Clamp Machine
Fahombiazana avo T Bolt AC220V 50HZ Tube Clamp ...
FRAND American Type 2.5KW Tube Clamp manao Mac ...
Milina Tube T Bolt Tube Clamp fanaovana milina
1 Ton Fomba tokana Amerikanina karazana fantsona Clamp Mak ...
Masinina 0.6Mpa T Bolt Hose Clamp Making Machine
1200 pcs / ora somary amerikana karazana Hose Clamp M ...
milina fanaovana sarontava, masinina fanaovana maska ​​tarehy, milina clamping hosotra, masinina mpanamboatra sarontava tarehy, milina fanaovana sarontava tarehy tsy tenona, milina fanaovana maska ​​tsy tenona,